လက်မှတ်တစ်စောင်တည်းဖြင့်လူနှစ်ယောက်ရထားစီးချင်း(humorous jokes) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » လက်မှတ်တစ်စောင်တည်းဖြင့်လူနှစ်ယောက်ရထားစီးချင်း(humorous jokes)
Posted by Don Juan Ronald on Mar 24, 2012 in Aha! Jokes, Satire, Creative Writing |9comments
မေတ္တာ ရပ် ခံ ချက် ။
၁ ။ ကျ နော့ ၏ ရေး သား ချက် များ သည် တ ခါ တ ရံ adult အ ကြောင်း များ ပါ ရှိ တတ် ၍ ၊ ၁၈ နှစ် မ ပြည့် သေး သော ခ လေး များ ၊ သူ တော် စင် သူ တော် ကောင်း နှင့် အ မျိုး သ မီး များ ဖတ် ရှု ရန် မ သင့် ပါ ။
၂ ။ တ ရုတ် တ ယောက် ရေး သည့် ပို့ စ် ကို ဖတ် ရန် အ ဆင် မ ပြေ လျှင် မိ မိ ဘာ သာ မိ မိ ဗ မာ လို ဘာ သာ ပြန် ၍ ဖတ် ရှု ပေး ပါ ရန် ။
******* Mine dish ******
ဒီ တ ပါတ် လည်း ဂျူး နှင့် တရုတ်ကြီး အ ကြောင်း ဖြစ် ပါ သည် ၊ ၎င်း တို့ ရဲ့တ ကိုယ် တော် အစွမ်းအစ များ ပို မို ထင် ရှား စေ ဖို့ ရန် သီး ခြား စီ တင် ပြ ပေး ပါ မည် ခင် ဗျား ။
အစ္စရေးနိုင်ငံ ဂျေရုစလင်မြို့ ၌ ဂျူး ညီ အစ် ကို နှစ် ယောက် နှင့် အာရပ် ညီး အ ကို နှစ် ယောက် တို့ သည် နေ့ စဉ် နံ နက် မြို့ ပတ် ရ ထား ဖြင့် အ တူ တူ ကျောင်း သွား ကြ ပါ သည် ။
ဂျူး ညီအစ်ကို သည် အ မြဲ တန်း ရ ထား လက် မှတ် တစ် စောင် တည်း သာ ဝယ် ၍ ၊ လက်မှတ် စစ် ကို အ ဝေး မှ မြင် သည့် အ ခါ ဂျူး က လေး နှစ် ယောက် သည် အိမ် သာ ထဲ သို့ပြေး ဝင် သွား ကြ ပါ သည် ၊
လက်မှတ်စစ် သည် အိမ်သာ ကို ဖြတ် သွား သည့် အ ခါ အိမ် သာ တွင်း လူ ရှိ သည် ကို မြင် တွေ့ လျှင် အိမ်သာ တံခါး ကို ခေါက် တတ် သည် ၊ ထို အ ခါ ဂျူး ကလေး သည် အိမ် သာ တံခါး ကို အ နည်း ငယ် ဟ ၍ ၊ လက် မှတ် တစ် စောင် ကို ပြ လိုက် သည် လက်မှတ်စစ် လည်း လက်မှတ် ကို ခြစ် ပြီး ရှေ့ဆက် သွား လိုက် ပါ သည် ။
ဤ ကဲ့ သို့ ကြာ လာသော အ ခါ အာရပ် ညီအစ်ကို ဟာ ဂျူး ညီအစ်ကို အား အ ရမ်း အား ကျ လာ ၏ ၊ အ တု မြင် အ တတ် သင် ဆို သ လို ပေါ့ ၊ တ ရက် ကျ တော့ သူ တို့ နှစ် ယောက် လည်း လက်မှတ် တစ် စောင် ဘဲ ဝယ် ပြီး လက်မှတ်စစ် ကို အဝေး မှ မြင် တဲ့ အခါ အိမ်သာ ထဲ သို့ ဦး အောင် ပြေး ဝင် သွား ပါ လေ တော့ သည် ၊
ခဏ လေး ကြာ တော့ ဂျူး ညီအစ်ကို ထဲ မှ ညီ ဖြစ် သူ သည် အိမ်သာ ဘက် သို့ပြေး သွား ပြီး တံခါး ကို ခေါက် လိုက် သည် ၊ အာရပ် လေး လည်း တံ ခါး ကို အ သာ လေး ဟ ပြီး လက် မှတ် ကို ပြ လိုက် သည် ၊ ဂျူး အ ငယ် ကောင် သည် လက် မှတ် ကို ယူ လိုက် ပြီး သူ့ထိုင် ခုံ နေ ရာ သို့ပြန် လာ ထိုင် နေ လေ တော့ သည် ၊ ထို အချိန် မှ စ ၍ သူ တို့ စီ မှာ လက်မှတ် နှစ် စောင် ဖြစ် သွား ပြီ ပေါ့ ။
လက်မှတ်စစ် အိမ်သာ ကို ဖြတ် သွား တဲ့ အချိန် တံခါး ကို မည် ကဲ့ သို့ ခေါက် ခေါက် လက် မှတ် ထွက် မလာ ပါ ၊ ထို အခါ ရဲ ကို ခေါ် ၍ အိမ်သာ တံခါး ကို ဖွင့် ပြီး အာရပ် လေး နှစ် ယောက် ကို ကုတ် သွား ပါ လေ တော့ သ တည်း ။
ဝေ စား မျှ စား ။
အမေရိကန်ပြည် NASA အဖွဲ့သည် သောင်္ကြာဂြိုလ် သို့အာကာသယာဉ် ဖြင့် လူသား ကို လွှတ် ၍ စူး စမ်း မည် ၊ လိုက် ပါ သွား သော လူ သည် ပြန် လာ နိုင် တော့ မည် မ ဟုတ် ဘဲ ဟို မှာ တင် သေး ဆုံး သွား မည် ဖြစ် သည် ။
ထို့ကြောင့် NASA အဖွဲ့သည် အ သေ ခံ နိုင် မည့် သူ များ အား လျှောက် လွှာ ခေါ် ယူ လိုက် သည် ၊ လာ ရောက် လျှောက် ထား သူ ထဲ မှာ အမေရိကန် ၊ ဂျပန် နှင့် တရုတ် ပေါင်း သုံး ယောက် ရှိ သည် ။
အင်တာဗျူး ပွဲ မှာ NASA လူကြီး က ၊ ပထမ ဆုံး အမေရိကန် ကို မေး လိုက် သည် “ ခင်ဗျား ယခု လို အသေ ခံတာ ငွေ ဘယ် လောက် လို ချင် ပါ သ လည်း ? ” အမေရိကန် က “ ကျနော့ ကို ဒေါ်လာ ၅ သန်း ပေး ပါ ၊ ဒီ ငွေ တွေ ကို ကျနော့ အ မိ တက္ကသိုလ် သို့လှူ ဒါန်း ပြီး ၊ အ မှတ်တရ အနေ နဲ့ကျောင်း တွင်း မှာ ကျ နော့ ရုပ်ထု တစ် ခု တည် ပေး ရင် ရ ပြီ ” ။
NASA လူကြီး က ဒုတိယ ဂျပန် ကို မေး သည် “ ခင်ဗျား ယခု လို အသေ ခံတာ ငွေ ဘယ် လောက် လို ချင် ပါ သ လည်း ? ” ဂျပန် က “ ကျနော့ ကို ဒေါ်လာ ၁၀ သန်း ပေး ပါ ၊ ဒီ ငွေ တွေ ကို ကျနော့ အ မိ တက္ကသိုလ် သို့ ၅ သန်း လှူ ဒါန်း ပြီး ၊ ကျန် ၅ သန်း ကို ကျနော့ မိသားစု နှင့် ဆွေမျိူး များ ကို မျှဝေ ပေး မည် ” ။
NASA လူကြီး က တတိယ တရုတ်ကြီး ကို မေး လိုက် သည် “ ခင်ဗျား ယခု လို အသေ ခံတာ ငွေ ဘယ် လောက် လို ချင် ပါ သ လည်း ? ” ၊ တရုတ်ကြီးက “ ကျနော့ ကို ဒေါ်လာ ၁၅ သန်း ပေး ပါ ” NASA လူကြီး က အံ့အား တင့် ပြီး “ ဒီ လောက် များ တဲ့ ငွေ တွေ ကို ခင်ဗျား ဘာ လုပ် မှာ လည်း ? ” တရုတ်ကြီး က ပြုံးပြုံး လေး နဲ့“ ကျနော် ဒီ ငွေ ၁၅ သန်း ထဲ မှ ၅ သန်း ကို စောစော က ဟို အမေရိကန် ကို ပေး ပြီး သူ့ သွား သေ ခိုင်း လိုက် မယ် ၊ ကျန် ၁၀ သန်း ကို ခင်ဗျား ၅ သန်း ကျနော် ၅ သန်း ခွဲ ယူ လိုက် ”
******* Side dish ******
လူကြီး များ အ တွက် ဟာ သ ။
( လူ ကြီး များ ဟု ဆို ရာ ၌ အ များ ပြည် သူ ကို အ နိုင် ကျင့် နေ သော အာဏာပိုင် များ ကို ဆို လို ချင်း မ ဟုတ် ဘဲ Adult ကို ဆို လို ပါ သည် )
မစ္စတာ Tom သည် ကုမ္ပဏီ ပိုင်ရှင် တ ဦး ဖြစ် ပြီး ၊ အပျော်တမ်း ဝတ်ပြု ဆရာ လည်း ဖြစ် ပါ သည် ၊ ယ နေ့ သူ သည် Nude Camp တ ခု သို့ဝတ်ပြု ဆုတောင်း ပွဲ သွား လုပ် ပေး ရ မည် ။ ထို့ကြောင့် နံနက် စောစောစီးစီး ဇနီးသည် ချက် ပေး ထား သော Breakfast ကို ဝ အောင် စား ပြီး Nude Camp သို့ထွက်ခွါ ခဲ့ ပါ သည် ။
Nude Camp ၏ ဂိတ် ဝ သို့ ရောက် ၍ အတွင်း ကို ဝင် တဲ့ အ ခါ ၊ ဂိတ်စောင့် က Nude Camp ၏ စည်းကမ်း အ ရ မည် သူ မ ဆို အထဲ ဝင် လျှင် အဝတ်အစား လုံးဝ မ ဝတ် ရ ၊ မစ္စတာ Tom ဟာ သူတော်စင် သူတော်ကောင်း ဖြစ် ပြီး ညတိုင်း သူ့ဇနီး နှင့် လင်မယား ကျင့်ဝတ် ပြု တဲ့ အခါ အမြဲ မီး မိတ် ပြီး ဆောင် ရွှက် လေ့ ရှိ ပါ သည် ၊ ထို့ကြောင့် ဂိတ်စောင့် ကို မ နဲ တောင်းပန် ပြီး အ နည်း ဆုံး သူ ၏ အရေးကြီး သော နေရာ ကို တော့ ဦးထုပ် လေး နဲ့ ဖုံး ထား ပါ ရ စေ ဟု တောင်းပန် လေ သည် ၊ နောက်ဆုံး ဂိတ်စောင့် လည်း ချို့ယွင်း ချက် အနေ နဲ့ ခွင့် ပြု လိုက် ပါ သည် ။
Nude Camp ၏ လမ်း မ ကြီး တ လျှောက် အဖွဲ့ဝင် များ လာ ရောက် ကြိုဆို နုတ်ဆက် ကြသည် ၊ ဘယ် ဘက် မှ လူ တွေ က နုတ်ဆက် ရင် Tom သည် ညာ ဘက် လက် ဖြင့် ဦးထုပ် ကို ကိုင် ထား ပြီး ဘယ် လက် ကို ရမ်း ပြ ပါ သည် ။
ညာ ဘက် က လူ တွေ နုတ်ဆက် တော့ ၊ ညာ လက် ကို ရမ်း ပြ ပြီး၊ ဘယ် လက် ဖြင့် ဦးထုပ် ကို ကိုင် ထား ပါ သည် ။
နှစ် ဘက် စ လုံး က လူ တွေ တ ပြိုင် တည်း သောင်းသောင်းဖြဖြ ဖြင့် နုတ်ဆက် တော့ Tom သည် လက် နှစ် ဘက် ကို မြောက် ၍ လက် ရမ်း ပြ လေ ပါ တော့ သည် ၊ ထို အ ခါ ဦးထုပ် သည် အောက် ကျ မ သွား ဘဲ တခုခု နှင့် ချိတ် မိနေသည် ။
လူ အုပ် ထဲ မှ ၊
ဗမာ ပြန် အမျိုးသမီး တ ဦး က “ ဟဲ့ ! သူတောင်းစား ထမင်း ဝ တော့ _ _ _ ၊ ဦးထုပ် တောင် ချိတ် ထား လိုက် သေး တယ် ”
ကုလားဖြူ အမျိုးသမီး က “ အော် ~~ ယေကျာ်း များ ကိုယ်ခန္ဓာ အောက် ပိုင်း နဲ့တာ တွေးခေါ် ဆုံးဖြတ် တတ် လေ့ ရှိ့တယ် ဆို တာ မှန် လှ ချည် လား ၊ ကြည့် ဆန်း ~~ ဦးထုပ် တောင် စောင်း ထား တယ် ”
အမဲမ တ ယောက် “ ယေကျာ်း လည်း အ သဲ နဲ့ ပါ တော်~~ ဒီ လောက် တော့ reaction ရှိ မှာ ပေါ့ ”
အား လုံး ရွှင် လန်း ချမ်း မြေက ပါ စေ ~~~
ကျေး ဇူး တင် ပါ သည် ~~~
ကြိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ. . .
တရားဟောဆရာဆောင်းတဲ့ ဦးထုပ်ကို ကက်ဦးထုပ်ရောင်းတဲ့ ကုမ္မဏီက ထိုးမပေါက်ဦးထုပ်အဖြစ် ကြော်ငြာဖို့ ဒေါ်လာတသန်းပေးဝယ်သွားတယ်ပြောဒယ်…။ ဒါနဲ့ ဦးဒွန်ဟိုတလောက ထီပေါက်တယ်ဆို….
ဆရာ ကြောင်ကြီး ရေ ~~~
ထီ ပေါက် ဖို့ တော့ ရည်ရွယ် ထား တယ် ၊ လောလောဆယ် မှာ တော့ လူ (စိတ်) ပေါက် နေ တယ် ။
တရားဟောဆရာ ငယ်တုန်းက လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန် လုပ်ခဲ့ပုံဘဲ ။ ဟီဟိ
ခုမှ ဓါတ်ပုံကို ကြည့်မိတယ် ခေါင်းဆောင်ကြီး တိန့်ရှောင်ဖိန် ပုံလေးဘဲ ညဏ်ကြီးရှင်လို့ အသိမှတ်ပြုပါတယ်
ဆရာ ကိုကိုအသံသာ ~~~
အ သံ ထွက် အ မှန် က “ တိန်ရှောက်ဖင် ” ဟု လည်း ဖတ် နိုင်ပါသည် ။
ရွာ ထဲ မှ ကြောင် များ တွေ ကို ချောက် ဖို့ တရုတ် ခေါင်း ဆောင် ဟောင်း ကြီး ရဲ့ ပုံ ကို အ သုံး ပြု လုပ် ထား ချင်း ဖြစ် ပါ ကြောင်း ပါ ခင် ဗျား ~~~~